Madaxweynaha oo hambalyo u direy Ciidammada Asluubta”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo hambalyo u direy Ciidammada Asluubta”SAWIRRO”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Ciidammada Asluubta Soomaaliyeed ku ammaaney sida ay uga soo dhalaaleen hawsha adag ee loo xilsaarey ee dhinacyada difaaca, dhaqancelinta iyo barbaarinta.
Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabadda xuska sannadguuradii 45aad ee ka soo wareegtey aasaaska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo lagu qabtey Xarunta Taliska Ciidammada Asluubta ee magaalada Muqdisho, isagoo hambalyo ku aaddan xuskaasi u direy madaxda,saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee ciidammadaasi.
Waxaa uu sheegay in Ciidanka Asluubta ay sannadba sannadka ka dambeeya sameynayaan horumar la taaban karo, iyadoo lagu jiro xaalad adag.
“Ciidanka Asluubta waxay qeyb ka yihiin ciidammada qaran ee aan leenahay ee aan ku faanno. Waxay si xilkasnimo ah uga soo baxeen waajibaadkooda, iyagoon helin taageero ku filan oo ay hawshooda ku gutaan,is-xilqaankooda ayaa keenay in maanta ay halkan ku soo bandhigaan cutubyo si wanaagsan loo tababarey oo diyaar u ah gudashada waajibaadkooda, iyo weliba inay awoodeen inay iibsadaan gawaari cusub oo shaqada ciidammada lagu fuliyo.
Waa talaabo ku dayasho mudan oo aan filayo in qeybaha kale ee ciidammada ay ku dayan doonaan”.
Madaxweynaha ayaa khudbada ka hor salaan sharaf ka qaatey cutubyo ka tirsan Ciidammada Asluubta, waxaan munaasabadda ka soo qeybgaley Wasiirka Gaashaandhigga S/Guuto Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini,taliyeyaasha ciidammada qaranka iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha oo qaabiley Danjiraha Netherlands ee Soomaaliya